Xiddig Ka Tirsan Chelsea Oo Ka Baqaya Inuu Sabab U Noqdo Dhimashada Aabbihii – Gool24.Net
Xiddig Ka Tirsan Chelsea Oo Ka Baqaya Inuu Sabab U Noqdo Dhimashada Aabbihii
Weeraryahanka da’da yar ee Chelsea ee Tammy Abraham ayaa shaaciyey inuu ka baqayo inuu sabab u noqdo in aabbihii uu u geeriyoodo xanuunka Fayraska Korona, kaas oo marka uu dib ugu laabto garoomada ay ay suurtogal tahay inuu soo qaado kaddibna u gudbiyo aabbihii.
Abraham oo magaalada London kula nool qoyskiisa, waxa uu diyaar u yahay inuu kooxdiisa dib ugu soo laabto oo kulanka ugu horreeya u ciyaaro, laakiin waxa uu ku xidhay shuruud ah in uu marka hore arko deegaan badqab ah oo uu ku ciyaari karayo, isla markaana aanu aabbihii xanuunka ugu keeni karaynin.
22 jirkan afka hore waxa uu caddeeyey in aabbihii uu qabo xanuunka Xiiqda ama Neefta, haddii uu xanuunka fayrasku ku dhacana ay naftiisu halis gelayso, waxaanu yidhi: “Aabahay waxa haysa xiiq. Haddii aan ku laabto horyaalka Premier League, oo Illaahay ha iga hayee uu igu dhaco xanuunku, kaddibna aan keeno guriga, waa waxa ugu xun ee suurtogalka ah.
“Inaan dibedda u baxo oo aan garoonka tago wax weyn ayay ii tahay aniga, laakiin aabahay oo Xiiq qaba iyo waxa ugu dambeeya oo ah inaan soo qaado fayraska kaddibna aan u gudbiyo wax qof kale, ayaa iyaduna wax xun ah.”
Laacibka reer England waxa uu tilmaamay inuu sugi doono illaa inta badqab uu dareemayo oo uu guriga joogi doono, waxa se uu qiray in aabbihii uu ku riixayo inuu si degdeg ah ugu laabto garoomada, waxaanu yidhi: “Haddii ay badqab noqoto, waynu samayn, haddii kalena waynu sugi doonaa.”